Mushonga wenhengo yesimbi isina simba, unotengesa mumafekitari - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Security > Marudi>Mwenzi ine nhonga yesimbi isina simba
Mwenzi ine nhonga yesimbi isina simbaInoitwa nesimbi yakakwirira isina simba ya304, 316, 304 L, 316 L. Uye zvivako zvikuru zviviri zvetambo dzesimbi dzisina simba 7 × 7 uye 7 × 19, uye 1 × 7 uye 1 × 19 zvinogoverwawo. Ngeri yenhema ine 90 °. Mvura yacho haigoni kukuvadza maoko nokuda kwokunyora kwayo kwakanaka. Uye hazvingakuvadziwo mhuka neshiri. Naizvozvo inoshandiswa zvikurukuru sezvinochengeta mhuka zvisina simba kuti dzidzivirire mhuka, uye inogona kuita kuti vashanyi vafarikanye mhuka dzisina ngozi. Kunze kwezvo, inoshandiswa senzvimbo isina simba uye mashoko eshiri kuita kuti shiri dzirarame zvakanaka.
Chivako Chokuita Nokuseha
Mhizha yedu ine mvura yakawanda inoshandiswa uye inoshandiswa zvikuru mukutevera:
LKushaya kwakasiyana - siyana
Nechivako chakagara, mvura ine mapfundo inodzivisa nenzira inobudirira vanhu nemhuka kusvibiswa. Uyezve, mvura iyi inodzivisa zvikuru, ndiko kuti inogona kugovera dziviriro yakaisvonaka kumhuka dzakavharwa ndokuderedza kukuvadzwa.
Yakagadzirwa nenzira yakakwirira yesimbi isina kunaka AISI 304 kana kuti AISI 316, Mhizha yedu yemhosva yenhengo ine usingaparadziki nokugovera simba guru nokudzivisa. Rine kudzivisa kwakaisvonaka nokuchema kwazvo, kukwanisa kwemitoro yakakwirira kutakura sinou yakarema. Munguvayi, inogona kutsungirira kutsenga kunoparadza kunoitwa nemarara nezvimwe zvipembenene.
Zvinhu zvakaenzana zverhombic zvinobvumira kuita zvinhu zvakawanda pasina kuita chiono ipi neipi. Chitarisiko chako chakaisvonaka uye chivako chakasimba chinoita kuti kukosheswa zvikuru navagadziri vebindu uye vagadziri vemapurani munyika yose.
Mash mush yamabhare yakanaka inoshamisa mamiriro okunze kuitira kuti agogona kukurira migariro yakaoma zvikurusa yakadai semvura yakaoma, rinorema rinonyanya kunyange dutu. Rinewo kurwisana kwazvo kuUV, kuparadza nengura izvo zvinobvumira upenyu refu kupfuura makore 30. Munguvayi, mvura yedu ine mvura ine mapfundo haina kuchengetedza uye kuchenesa chaicho nokupfeka hakudini.
Kunze kwezvo, mhosva yenhengo yakapfundiswa inogoverwa nekambani yedu ine ushamwari hwemhoteredzo, hahukwiki uye inoshandiswazve. Mukuwedzera, chivako chinochinjika chinobvumira kugomera kwapachena-angle nokupetwa nokuda kwokufambisa zviri nyore nokugadzwa.
Mufananidzo wemhosva wakanyora
Ndini zita: mvura inenge ine mvura.
L Cable mashoko: simbi risina simba AISI 304, 304L, 316 kana kuti 316L.
L Cable diameter: 1/8 ", 3/32", 5/64 ", 1/16" uye 3/64.
L Mesh mukuru wokuzarura: 1 "× 1", 1-1 / 2 ", 2" × 2 ", 3" × 3 "ne 4" × 4 ".
L Standard mesh angele: 90 °.
L Mesh: W: 20 mm kusvika 120 mm; H: 20 mm kusvika 120 mm.
Mbiri:Mwenzi wetambo yesimbi isina simba
Taga: rope mesh, stainless steel knotted rope mesh, knotted cable mesh,
Nzira dzokudzivisa kukuvadzwa kwemvura ine mapfundire
Mwenzi inoshandisa nzira yesimbi isina simba inoshandisa nguva yakareba sei?
Nei mvura yesimbi isina simba ine mvura ine mvura inobva?